Post nguva: Kubvumbi-21-2021
Iyo Chinese mhando INDIAM popcorn yakavambwa neyakareruka fungidziro: vanhu vanokodzera zvidyiwa izvo zvinonaka zvinonaka uye zvakavanakira. Mhedzisiro yacho yaive yakanakisa kuravira popcorn neiyo shoma, yakachena uye yakapusa zvigadzirwa zvinogoneka.Verenga zvimwe »
Iyo brand linkage ye INDIAM popcorn uye Mercedes-Benz Mota
Post nguva: Kubvumbi-20-2021
Iyo brand linkage ye INDIAM popcorn uye Mercedes-Benz Mota INDIAM popcorn vanobatana maoko neMercedes-Benz Cars zvinobudirira kune izvi zviitiko Zvinoratidza kuti INDIAM popcorn ine zvakapfuma kwazvo zvemukati merit. Zvikurukuru, Indiam popcorn ine yavo pachavo kunzwisisa kune kwevatengi maitiro uye yekumhara chigadzirwa. utsva ... Verenga zvimwe »
1) Chii Chinoita Kuti Popcorn Pop? Imwe neimwe tsanga yemapopcorn ine donhwe remvura rakachengetwa mukati medenderedzwa re starch rakapfava. (Ndokusaka popcorn inoda kuve ne13.5 muzana kusvika ku14 muzana hunyoro.) Iyo starch yakapfava yakakomberedzwa nenzvimbo yakaoma yekunze yakaoma. Sezvo kernel inopisa, iyo wa ...Verenga zvimwe »
Musi waKurume 24, 2021, mhemberero yekuvhura yekutanga popcorn kutumira kunze kweHebie CiCi Kambani kuJapan yakaitirwa muJinzhou Factory. Vakuru vemakanzuru nemadhipatimendi akakodzera vakapinda musangano wekuenda. Iyo popcorn kutumira kunze zvakare iri yekutanga batch yeChina's sph ...Verenga zvimwe »
Post nguva: Mar-29-2021
Xing Guohui, nhengo yedare rakamira rekomiti yedunhu rebato, mutevedzeri wemukuru wedunhu revanhu kongiresi uye munyori wekomiti yedare rejijiazhuang, akashanyira INDIAM popcorn dumba reHebei Cici Co, Ltd 2021, Kurume 16, Shijiazhuang akabata spri ... Verenga zvimwe »
INDIAM popcorn, popcorn, China Yakagadzirirwa Classroom, Caramel popcorn,